Sidee Harganka Ilmaha Looga Daaweeyaa? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Abshiro Axmed Cabdi — August 30, 2019
Dhallaanku waxay yeeshaan caabuq ku dhaca marinka neefsashada, cunaha, sanka iyo afka. Waxay sidoo kale kudhaco hargab kaasa oo wato qufac joogto ah iyo hindhiso. Tani waxay ka dhigeysaa habka neefsashada mid adag taas oo nuugistu ku adkaan karto cuniga.
Hargabku waa cudur aan khatar ahayn oo faafa oo caadi ah, gaar ahaan xilliga qaboobaha. Waxaan wax badan ka baran doonnaa sababaha hargabka carruurta yar yar iyo siyaabaha looga hortago loona daweeyo.
Qufac iyo hindhisi joogto ah.
Codkiisa oo isbadalo.
Oohin ama cabasho badan.
Siyaabaha looga ilaaliyo dhallaanka hargabka.
Waa in ilmaha meela diiran la jiifiyo oo qabowga badan laga ilaaliyo. Waa in qof hargab qabo loo dhiibin ama laga agdhaweyn. Waa in laga ilaaliyo sigaar ku cabista ilmaha yar agtooda. Waa in hooyada haday hargab qabto aysan ilmaha shumiska iyo la ciyaarista aysan ku badan si uusan ugu gudbin hargabka. Haka badin carafta marada aad ilmaha ugalineysid. Maxayeelay waxuu ka qaadi karaa sanboor iyo hargab.
Hooyadu waa in ay nuujiso cuniga maalinkii sadex mar ugu yaraan. Maxaa yeelay caanaha naasku waxay kordhiyaan difaaca ilmaha, sidoo kale waxaa ku jira antibiyootig.
Hooyadu waa in ay ilaaaliso qaabka cuniga ujiifanayo maxaa yeelay cuniga waxaa ku dhagi karto neefta.
Waa in cuniga sankiisa la mariyo wax yar oo fasiliin (Vaseline) ah si uu j qoyo.
Waa in cuniga loogu qubeeyo biyo diiran say qandhadu uga jabto una dareemo firfircooni.
Ha siinin cuniga daawo aan dhaqtar usoo qorin. Maxaa yeelay daawooyinka ilmaha waxay leeyihiin qiyaaso ugaar ah. Kuwaas oo hadii aad qaladin dhaawici karto nolasha cuniga.
Sii cuniga biyo badan kuna celceli si suusan jirkiisa biyo la’aan u noqon.
Si sax usii Daawada dhaqtarka u soo qoray. Markastana ilaali Daryeelkiisa.
Waqtiga la tashiga dhaqtar
Haddii hooyadu aysan dareemaynin horumarin caafimadka cunugeeda 3 maalmood gudaheeda oo ay kusii korarto qandhadu, waa in hooyadu la xariirto dhaqtarka. Haddii cunugu dhib ku qabo neefsashada oo ay wehliso qufaco badan iyo xaako adeyga ah.waa in lalo xiriiriyo dhaqtar.
Hadii uu weynaado qanjirka dhuunta. Waa in la ogeysiiyo dhaqtarka. Sidoo kale hadaa ku aragto xaalado kale ee cuniga dhib ku ah waa in lala socodsiiyo dhaqtarka.
Tags: Sidee Harganka ilmaha looga daaweeyaa?
Next post Sidee Guusha Dhabta ah Loo Gaadhaa? - Qeybta 1aad
Previous post Jaajuuskii Mareykanka Ahaa ee Bixiyay Sirta Nuclear-ka ee Waliba Baxsaday